Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Laos » Laos dia nanitatra ny fanidiana ny firenena hatramin'ny 18 Aogositra
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Laos • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Hitarina ny fanidiana raha toa ka mbola tsy voafehy tanteraka ny toe-javatra COVID-19 any Laos ary mbola tandindomin-doza ny zava-misy any amin'ireo firenena mifanila aminy.
Tapitra ny talata izao ny fanidiana ny firenena, napetraka tamin'ny 19 Jolay.
Hatramin'ny talata dia nahatratra 19 ny isan'ny tranga voamarina fa COVID-7,015 tany Laos ka olona fito no maty.
Maromaro ny marary COVID-3,616 miisa 19 no efa sitrana ary navoaka ny hopitaly.
Nanambara ny governemanta Laos fa tapaka ny hevitra fa hanitatra ny fanidiana COVID-19 manerana ny firenena hatramin'ny 18 Aogositra satria nitombo hatrany ny isan'ireo aretina vaovao voan'ny virus coronavirus.
Thipphakone Chanthavongsa, talen'ny praiminisitra lefitra, Thipphakone Chanthavongsa, dia nilaza tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tao Vientiane renivohitra Lao ny talata teo fa hitatra ny fanidiana satria mbola tsy voafehy tanteraka ny raharaha COVID-19 any Laos ary mbola tandindomin-doza ny raharaha any amin'ireo firenena mifanila aminy.
Ny ankehitriny Laos Nikatona ny talata teo ny fanidiana ny firenena, napetraka tamin'ny 19 Jolay.
Ny komitim-pirenena ho an'ny fisorohana sy fanaraha-maso COVID-19 tamin'ny talata dia nitatitra tranga 237 nafarana vaovao ary tranga 13 nafindra ao an-toerana.
Anisan'ireo tranga nafarana, 78 no notaterina tao Vientiane renivohitra Lao, 63 tany Savannakhet, 48 tany Champasak, 30 tany Khammuan, 16 tany Saravan, ary roa tany amin'ny faritanin'i Vientiane.